सहरमा व्या’पक संक्रमण, काठमाडौं उपत्यका ‘हटस्पट’ ! – Gandaki Chhadke
सहरमा व्या’पक संक्रमण, काठमाडौं उपत्यका ‘हटस्पट’ !
By गण्डकी छड्के Last updated Nov 1, 2020
A view of Kathmandu valley seen from Thupten choeling Monastery Kathmandu on Wednesday 12 october 2011 Photo: Keshab Thoker/Nagarik/Republica
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंसहित सहरी क्षेत्रमा कोरोना भाइरस व्यापक रूपमा फै’लिएको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ई’डीसीडी)ले हालै गरेको सेरो प्रि’भिलेन्स सर्भेले सहरी क्षेत्रमा स’मुदायमै संक्रमण फै’लिएको देखाएको छ। त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका ‘ह’टस्पट’ बनेको छ। उपत्यकामै कुल संक्रमितको संख्या ७६ हजार ३ सय ४८ पुगेको छ। महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले सहरी क्षेत्रमा सबै उमेर स’मूहमा संक्रमण देखिएको बताए। याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।
‘सबै उमेर समूहमा संक्रमण देखिनु समुदायमा संक्रमण भएको सू’चक हो’, निर्देशक डा. पाण्डेले भने, ‘बालबालिका, महिला र वृ’द्धवृद्धामा समेत संक्रमण देखियो।’ मुलुकभर शनिबार २ हजार ५ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये महिला ९ सय ७६ र पुरुष १ हजार ५ सय ३२ जना छन्। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या १ लाख ७० हजार ७ सय ४३ पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार २ सय ६४ जना निको भएका छन्। त्यसैगरी, थप १७ जनाको मृ’त्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गु’माउनेको संख्या ९ सय ३७ पुगेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार २ सय ७९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३८ हजार ५ सय ८४ छ। काठमाडौं उपत्यकामा २० हजार ३ सय ४४ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।काठमाडौं जिल्लामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ हजार ८ सय ९० पुगेको छ।
अभिनेत्री ऋचा शर्मा कोरोना संक्रमणमुक्त भइन्